यात्रु ठग्नेमाथि ट्राफिकको निगरानी : RajdhaniDaily.com
टेनिस रोका - June 18, 2021 0
Home भर्खरै यात्रु ठग्नेमाथि ट्राफिकको निगरानी
यात्रु ठग्नेमाथि ट्राफिकको निगरानी
काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीमा यात्रुसँग बढी भाडा असुल्नेमाथि ट्राफिक प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा काठमाडौं उपत्यबाट नै बढी भाडा असुल्ने पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कलंकी चोकबाट काउन्टरका दुई जनालाई यात्रुसँग मनोमानी भाडा लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको जनाएको छ । काठमाडौंदेखि झापा मोरङको नियमित भाडा १ हजारदेखि १२ सयसम्म भए पनि यात्रुसँग दुई गुणा बढी जनही २५ सयका दरले भाडा उठाएको पाइएपछि महाशाखाका सादा पोसाकको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
महाशाखाका अनुसार खोटाङ स्थायी घर भई कलंकी बस्ने भीमबहादुर खड्का र रौतहट घर भई खसीबजार बस्ने बैजनाथ चौधरी पक्राउ परेका जनाएका छन् । उपत्यकाको रिङरोड चल्ने बा४ख १९२४ नम्बरको पाथिभारा दर्शनको बसमा यात्रु लग्ने गरी टिकट काटिएको पाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाको टोलीले यात्रुसँग बढी भाडा लिएको पाइएपछि गंगबु बसपार्क आसपासबाट पनि तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । निषेधाज्ञामा मौकाको फाइदा लिन खोज्ने पोखरा माइक्रो र बुटवल भैरहवा काउन्टरको कर्मचारीलाई बिहीबार बसपार्कबाट नियन्त्रणमा लिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको नियमित भाडा ५ सय र बुटवलसम्म १२ सय तोकिएकोमा ५ सय प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिएको कसुरमा तीन जनालाई पक्राउ गरिएको महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले बताए । उनले पोखरा जाने यात्रुसँग ३५ सय र बुटवल जाने यात्रुबाट जनही ६ हजारका दरले भाडा लिने क्रममा पक्राउ गरिएको बताएका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा पोखरा माइक्रोमा काम गर्ने पोखरा–३३ घर भई काठमाडौं बस्ने बन्दराज पराजुली र मोरङ घर भई नेपालटार बस्ने नवीन पौडेल साथै बुटवल भैरहवा काउन्टरमा काम गर्ने धादिङ थाक्रेका रञ्जित सिलवाल रहेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महामारी जस्तो विषम परिस्थितिमा हुन सक्ने यात्रु ठगी तथा आइपर्नसक्ने यातायातसम्बन्धी समस्या अनुगमनका लागि सादा पोसाकमा विशेष टोली परिचालन गरेको जनाएको छ ।
महाशाखाले यात्रुसँग बढी भाडा लिने बागलुङ भगवती काउन्टरका कर्मचारी मिलन सारुलाई महाशाखाले बुधबार पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले बढी भाडा लिएमा वा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा प्रहरीको हटलाइन १०० वा ट्राफिक कन्ट्रोल १०३ मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
१ हजार ५ सय ८० सवारी नियन्त्रणमा
महाशाखाले निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्ने १५ सय ८० सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
महाशाखाले निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने १५ सय ८० सवारी साधनलाई शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको हो । जसमा ४ सय ७४ वटा चार पांग्रे तथा हेभी सवारी साधन रहेका छन् भने ११ सय ६ वटा दुई पांग्रे सवारी साधन रहेका छन् ।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : रोकथाम तथा उपचारमा महत्व
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारमा महत्व दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोमबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गण्डकी...
मनाङमा एक बेपत्ता, उद्दारमा खटिएको टोली गन्तव्य पुग्न सकेन
लमजुङ । हिमाल पारीको जिल्ला मनाङमा अविरल वर्षले जनजीवन प्रभावित भएको छ । बाढीमा परेर एक जना बेपत्ता भएका छन् । अझै वर्षा नरोकिएकाले...
प्रधानमन्त्री ओली झापा आगमन
भद्रपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापा जिल्लामा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन आज यहाँ आएका छन् । भद्रपुर विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रदेश...
अमेरिकी चुनाव : बाइडेनको अग्रता कायमै
विदेश टेनिस रोका - November 2, 2020 0
वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावको तिथि जति नजिकिँदै गएको छ, चुनावी मतसर्वेक्षणले राष्ट्रपतिका दुई प्रतिस्पर्धीमध्ये डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडेनले अग्रता कायम राख्नु भएको...
Breaking News टेनिस रोका - May 10, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरालगायत सीमाका विषय पेचिलो बनेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि...
बिचार टेनिस रोका - January 16, 2021 0
तुलसीपुरमा अज्ञात समूहद्वारा बसमा आगजनी
प्रदेश ५ टेनिस रोका - March 19, 2020 0
तुलसीपुर । गएराति अज्ञात समूहले तुलसीपुरमा एउटा बसमा आगजनी गरेको छ । तुलसीपुरको बसपार्कमा रहेको टिकट काउण्टरदेखि दक्षिण तर्फ पार्किङ गरी राखेको ना४ख ७१८८...
साउदी अर्थमन्त्री बर्खास्त
विदेश टेनिस रोका - March 6, 2020 0
रियाद। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको अवस्थामा साउदी अरेबियाका राजा सल्मानले अर्थमन्त्री मोहम्मद अल–टुवाइज्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका छन् । साउदी प्रेस एजेन्सीले अर्थ...
पत्रकार बानियाँको परिवारलाई अमेरिकावासी नेपालीको साँढे तीन लाख सहयोग
प्रदेश टेनिस रोका - September 8, 2020 0
काठमाडौं । दिवंगत पत्रकार बलराम बानियाँको परिवारलाई अमेरिकाको न्युयोर्कबाट राधाकृष्ण देउजाको एकल पहलमा संकलित आर्थिक सहयोग उनकी छोरी सुस्मीता बाँनियालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - June 2, 2021 0
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ३१६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै एक सय एक जनाको मृत्यु भएको...
सिन्धुलीमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा चारको मृत्यु, आठ घाईते
प्रदेश ३ बिमला पाण्डे - March 16, 2021 0
बिमला पाण्डे, सिन्धुली । मंगलबार साँझ सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीबाट कमलामाई नगरपालिका–७ बाँसकटेरीतर्फ जाँदै गरेको बोलेरो कमलामाई नगरपालिका वडा नंं. ७ को करमडाँडामा जीप दुर्घटना भएको...
सामाजिक सञ्जाल र मनोविज्ञान
बिचार टेनिस रोका - June 25, 2020 0
२१औं शताब्दीमा विश्व प्रविधिमैत्री भएको छ । विश्वका प्रत्येक देशका मानिसले प्रविधिको अधिक प्रयोग गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीका बेला विश्वका प्रायः मानिसले प्रविधिमा...
अर्थतन्त्र चलायमान गराउने मौद्रिक नीति
अर्थ टेनिस रोका - July 18, 2020 0
काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को संकटका कारण धर्मराएको अर्थतन्त्रलाई जुर्मुराउने गरी शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र चलायमान गराउने गरी...
युरोकपः इंग्ल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स र अष्ट्रिया विजयी
एजेन्सी - June 14, 2021
नन्दा थापा - June 15, 2021